Archive du 20190312
Sarah Zoe Ravaonirina Miantso famondronan-kery ho an’ny TIM.K25
y voatery mahazo seza na toerana vao afaka mandray andraikitra eto amin’ny firenena, hoy Rtoa Sarah Zoe Ravaonirina Filohan’ny Vondron’Olon-Tsotra na ny VOT. Tsy mila tambiny ny fanaovana asa soa ho an’ny VOT, izy.
Fandefasana horonan-tsary mamoafady Ho sahirana ny fahitalavitra I-BC
Niteraka resabe ny sarimihetsika sokajiana ho mamoafady nandeha tamin’ny fahitalavitra tsy miankina I-BC omaly 11 martsa tokony ho tamin’ny 11 ora atoandro teo.
« Thb Champion’s League Malagasy » Mitarika ny Fc Zanakala any Fianarantsoa
Mitarika ao amin’ny vondrona C milalao any Fianarantsoa ny Zanakala Fc (M/Ambony) manana isa 6 (+11) arahin’ny CNaPS Sport isa 6 (+10). Faha-3 nny FcVaknà isa 6 (+5).
Nanamarika tanteraka ny fihaonambe ara-toekarena faha-49 natao tany Davos Soisa ny jery todika nataon’ny filohan’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena FMI, Christine Lagarde nanao ny famelabelarana nilaza fa nisy ny fihemorana ara-toekarena maneran-tany tamin’iny taona 2018 iny.
Lakrimozenina sy bala tra-tehaka Ahiana ny fikotrehana korontana
Baomba mandatsa-dranomaso 6 sy bala 7 no tra-tehaky ny polisy teo Anatihazo Isotry. Fitaovam-piadiana izay tsy tokony ho eny am-pelatanana sivily ary hahafahana manakorontana na mandratra sy mamono olona mihitsy aza.
ITAOSY Mirongatra ny vaky trano
Tsy vitsy ireo mponina tonga mitaraina amin’ny tomponandraikitra eny an-toerana, indrindra amin’ny fokontany mahakasika ireo izay lasibatry ny vaky trano, indrindra ny lakozia sy ny tsena ambany rihana izay tsy misy mpatory.
Ny Maitre Hanitra Razafimanantsoa avy amin’ny TIM.K25 no kandida voalohany nanatitra ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiany omaly ho an’ny boriborintany voalohany Antananarivo renivohitra.Anisan’ny mpiray lisitra aminy ny mpitandrina Roger Randriamisata.
Marary mafy any am-ponja ilay mpitondra fivavahana, Marc Tatandraza, hoy ireo mpiaradia aminy fa tsy mbola nodimandry izany.
Vehivavin’ Ambohidratrimo Nizara sakafo ho an’ireo zokiolona sy namboly hazo
Nizara sakafo ho an’ireo zokiolona vehivavy teny amin’ny distrikan’Ambohidratrimo ireo vehivavy manerana ireo kaominina 24 eny an-toerana ny faran’ny herinandro teo.
Pilaonina mitsangana etsy Andohatapenaka Manahy ny hoavin’ny taranany ireo mponina
Efa ho roatokom-bolana amin’izao fotoana izao no nitsanganan’ny pilaonina iray etsy Andohatapenaka, raha ny fanazavan’ny sefo fokontany ao an-toerana.